Androgel: Inona izany? Ny fomba fampiasana? Inona avy ireo vokany?
Mba hahazoana hozatra haingana sy mora kokoa, atleta maro no nampiasa androgel tamin'ny fanazaran-tenany. Androgel… Tohizo ny famakiana »Androgel: Inona izany? Ny fomba fampiasana? Inona avy ireo vokany?
Amphetamine: Inona no ilana azy? Inona avy ireo vokany? Ny fanontanianao eto!
1 septambra 2018 26 Novambra 2021
Ny akora iray efa nampiasaina eran'izao tontolo izao noho ny antony maro samihafa dia amphetamine. Indray mandeha izy dia nahatsapa ... Tohizo ny famakiana »Amphetamine: Inona no ilana azy? Inona avy ireo vokany? Ny fanontanianao eto!
Candicort: Inona no ilana azy? Ny fomba fampiasana? Mila fomba fahandro?
22 Jolay 2018 29 Novambra 2021
Isika rehetra dia tratran'ny aretina sy ny loto, ary raha ny holatra sy ny leviora no resahina dia mety ho olana lehibe ny fihanany eo amin'ny hoditra.... Tohizo ny famakiana »Candicort: Inona no ilana azy? Ny fomba fampiasana? Mila fomba fahandro?
Cytoneurin: Fa inona no ilana azy? Fattening? Mila fomba fahandro?
Ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana ny areti-maso, ny cytoneurin dia fanafody tena mahomby amin'io tanjona io. Manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretina isan-karazany toy ny… Tohizo ny famakiana »Cytoneurin: Fa inona no ilana azy? Fattening? Mila fomba fahandro?
Azithromycin: Fa inona izany? Inona ny fatra? Manampy amin'ny fitsaboana ny mony ve izany?
21 Jolay 2018 29 Novambra 2021
Azithromycin dia antibiotika be mpampiasa eran'izao tontolo izao ary tena mahomby amin'ny fitsaboana ny olana isan-karazany manomboka amin'ny taovam-pisefoana ka hatramin'ny karazana hafa... Tohizo ny famakiana »Azithromycin: Fa inona izany? Inona ny fatra? Manampy amin'ny fitsaboana ny mony ve izany?
Ketoprofen: Inona no ilana azy? Misy fiatraikany ve? Inona ny fatra?
17 Jolay 2018 29 Novambra 2021
Ketoprofen, fantatra amin'ny anarana hoe Profenid, dia anti-inflammatoire ampiasaina hanamaivanana ny fanaintainana amin'ny ankapobeny ary koa ho an'ny tanjona fanasitranana hafa ho an'ny vatana. Tohizo ny famakiana »Ketoprofen: Inona no ilana azy? Misy fiatraikany ve? Inona ny fatra?
Acetylcysteine: Inona no ilana azy? Inona ny fonosana fonosana? Manana fanoherana ve ianao? Apetraho ny fanontanianao!
15 Jolay 2018 29 Novambra 2021
Efa nanana olana tamin'ilay "tratra feno" malaza ve ianao? Raha tratran'ny kohaka ianao ka tsy afaka nandroaka ny sekretera tamin'ny fomba... Tohizo ny famakiana »Acetylcysteine: Inona no ilana azy? Inona ny fonosana fonosana? Manana fanoherana ve ianao? Apetraho ny fanontanianao!
Topiramate: famantarana, vokatra hafa, fomba fandraisana, fatra ary izay rehetra tokony ho fantatrao!
28 Jona 2018 29 Novambra 2021
Topiramate dia ampiasaina irery na miaraka amin'ny fanafody hafa mba hisorohana sy hifehezana ny fiankinan-doha (epilepsy). Ity fanafody ity koa dia ampiasaina mba hisorohana ny aretin'andoha… Tohizo ny famakiana »Topiramate: famantarana, vokatra hafa, fomba fandraisana, fatra ary izay rehetra tokony ho fantatrao!
GABA: Jereo hoe inona izany ary ahoana ny fomba hanampiany anao!
22 Jona 2018 29 Novambra 2021
Maro ny olona manonofy ny hanana hozatra lehibe sy tony. Noho izany, maro amin’izy ireo no miafara amin’ny fanazarantena mavesatra, saingy tsy tafita foana ny vokatra... Tohizo ny famakiana »GABA: Jereo hoe inona izany ary ahoana ny fomba hanampiany anao!